တပ်မတော် Archives - The Rohingya
Home Tags Posts tagged with "တပ်မတော်"
မြန်မာစစ်တပ်ကို နိုင်ငံရေးမှ ဖယ်ထုတ်သင့်ဟု ကုလသမဂ္ဂပြောကြား
ပြီးခဲ့သည့်မတ်လက သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည့် ဦးဝင်းမြင့်အား တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များက နှုတ်ဆက်နေကြစဉ်။ ဓာတ်ပုံ-အေအက်ဖ်ပီ September 18, 2018 မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်အားကြီးမားသော စစ်တပ်အား နိုင်ငံရေးမှ ဖယ်ထုတ်သင့်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးမှူးများက ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။ ရိုဟင်ဂျာများအား…
ရိုဟင်ဂျာအရေး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ တွေးမိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ရစဉ် Photo: World Economic Forum 2018-09-13 ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်အနေနဲ့…
တပ်မတော် ခေါင်းဆောင် သားသမီးတွေ ကန် ပြည်ဝင်ခွင့် ရရှိနေ
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်မှာထုတ်ဝေတဲ့ Politico သတင်းမဂ္ဂဇင်း ရုံးခန်းကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် Photo: AP /Jacquelyn Martin 2018-08-11 အမေရိကန်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ မြန်မာအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကို တင်းတင်း…
လူနည်းစု အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသူ ဝေဝေနု
ရခိုင် အခြေအနေ VOA သတင်းထောက်ရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်
မဝေဝေနုရဲ့ မတရားမှုများ အဆုံးသတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး အိပ်မက်
အစိမ်းရောင်ကဒ် NVC ကိုဘာကြောင့် လာမထုတ်ကြတာလဲ
ARAKAN BULLETIN-JANUARY 2019 https://t.co/0cF4yWYkZe
ARAKAN BULLETIN-JANUARY 2019 https://t.co/CWkOgSHFRa https://t.co/xq6FvwJ5Jv
27 out of 31 Rohingya arrested in Tripura registered as refugees: UNHCR https://t.co/qHwBfdKBww
NGO to develop RM20 million school for Rohingya Muslims https://t.co/bVyP4PhkeL
အာရ်ကန် စာစဉ် (Arakan Bulletin)
အာရ်ကန် သတင်းစုစည်းမှု စာစဉ် (Arakan Bulletin)
Cox's Bazar FFM ICC NVC ကဒ် ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ ကုလသမဂ္ဂ တပ်မတော် ဒုက္ခသည်တွေ ပဋိပက္ခ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ မဝေဝေနု ရခိုင်မြောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ပဋိပက္ခ ရိုက်တာသတင်းထောက် ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦး ရိုဟင်ဂျာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခ သည် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်အရေး ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေ ရိုဟင်ဂျာ အရေး ရိုဟင်ဂျာအရေး လူနည်းစု အခွင့်အရေး လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု လူ့အခွင့်အရေး သတင်းမီဒီယာသမားတွေ အစီရင်ခံစာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မောင်တော ပြန်လည်လက်ခံရေး မြန်မာစစ်တပ် မြန်မာအစိုးရ မြန်မာ အစိုးရ မြန်မာ့တပ်မတော် မြန်မာ နိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Yanghee Lee မြန်မာနိုင်ငံ ရိုဟင်ဂျာ
အာရ်ကန် စာစဉ် (Arakan Bulletin) – December...
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အပေါ် အရေးယူဖို့ Yanghee Lee တိုက်တွန်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ကုလလူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်တွေ့ဆုံ
ARSA က နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို ပစ်တယ်ဆုိုတဲ့ Video...
နယ်ခြားစောင့်ရဲကားကို ARSA တိုက်ခိုက်မှု နိုင်ငံပိုင်သတင်းမှာဖေါ်ပြ
© 2017 The Rohingya. All Rights Reserved. Customized By Sthumoe